Bilad-sannadeedka is dhexgalka shaqada ee sannadka 2007 - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bilad-sannadeedka is dhexgalka shaqada ee sannadka 2007
La daabacay onsdag 24 oktober 2007 kl 15.39
- U maleyn maayo iney dalka ka jiraan shirkado kale ee sideenna ey ka howlgalaan shaqaale badankood ey ka soo jeedaan asal ahaan dalka dibaddiisa.
Sida uu sheegey sarkaalka magaciisa la yiraahdo Mikael Anderze’n, ahan madaxa shirkadda Fexco Nordic, oo ey hoos timaado shirkadda xawaaladda ee Westren Union, isga oo ka hadlayey bilad sharafta sannadka ee isdhexgalka oo shirkadda uu madaxda ka yahey ka mid ahyed xubnihii ku guuleystey.
Sidoo kaleeto waxaa iyaguna billaddaa oo la bixiyey maalintii Isniinta taariikhduna aheyd 22-ka bisha Oktoober la qeybsadey maamulka sare ee gobolka Istockholm iyo degmada Järfälla.
Sannadkii 1998, ayaa la aasaasey markii ugu horreysey guddiga talada ee isdhexgalka shaqada oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan RIA, midkaasina oo ey ku bahoobeen ururrada shaqa bixiyeyaasha madaxa bannaan, midda shaqaalaha dawladda, heyadaha dawladda ee degmooyinka iyo gobollada iyo ururrada shaqaalaha ee LO, TCO iyo Saco.
Dhismaha guddigaasina oo looga gol lahaa u suurtagelinta bulshooyinka kala duwan dhammaantood suurtagal isku mid ah ee loo siman yahey kana jira goobaha shaqada.
Sidoo kaleeto waxaa RIA howlaheeda ka mid ah dhiirigelinta, daba galka iyo horumarinta hoowlaha la xiriira is dhexgalka. Iyo sidii looga hortegi lahaa faqooqnaanta iyo waxyeelooyinka goobaha suuqa shaqada.
Waa sannadkii sagaalad ee bilad sharaftan la siiyo cidda ey ula muuqato iney waxey weyn ka qabteen ama ka gaareen guulo la taaban karo arrimmaha kor ku xusan.
Sannadkan oo eyna sida aad horey u maqleyseenna nasiib u yeesheen saddex heyadood ee ka mid ah shirkadaha madaxa bannaan ee mulkida loo leeyahey, heyad dawladeed iyo mid goboleed, kuwaasina oo kala ah: Fexco Nordic, Maamulka heyad goboleedka gobolka Istockholm iyo degmada Järfälla.
Göran Ekström, waa madaxa heyadda shaqa bixinta ee heyadaha dawladda, islamarkaana wuxuu muddo sannad gaareysa hayey xilka gudoomiyenimo ee guddiga talada ee RAI ee isdhexgalka suuqa shaqada. Mar uu ka warramayey muhiimadda hoowsha guddiga wuxuu yiri:
- Waxaan qabaa iney tahey mid muhiimad aad u ballaaran ku fadhida, islamarkaana aan si wadajir ah uga shaqeyno isdhexgalka nolosha shaqada iyo shaqaalaha.
Sida aan qabana waa mid ka mid ah howlaha noogu muhiimsan ee wax qabad inooga baahan.
Muddada sagaalka sannadood ee aan howshan ku guda jirney, ayey horraantii nagu aheyd mid leel leel ku sugan roolka howshan nagaga aadan, hase yeeshee iminka waan sal dhiganey oo waxaan kala garaney kaalintayada, mahaddeedana waxaa in badan iska leh saraakiisha howshan gacanta kula jirta. Göran Ekström madaxa heyadda shaqa bixinta ee heyadaha dawladda.
Degmadda Järfälla ee ka mid aheyd heyadihii ku guuleystey biladsannadeedka uu bixiyo guddiga talada isdhexgalka goobaha shaqada ee sannadka 2007-da, ayuu sheegey Göran Ekström oo gudoonsiiyey billaddaa Lena Blom oo ka socotey degmada Järfälla in sababta ey degmadu ugu guuleysatey ey ka mid aheyd, in iyaga oo ka tallaaba qaadeya qorshe loogu magac darey EQUAL ey soo saareen hab ey ku xushaan shaqaalaha iyada oo la eegeyo heerkooda tacliineed.
Islamrkaana lagu tashaneyo mustaqbalka sal looga dhigey bulsho isku dhafan ee ka wada shaqeysa dhammaan goobaha shaqada middaasina oo loogu magac darey FAIR.